Solar Fusion: Huawei's shanduko tekinoroji musimba rezuva | Green Renewables
Simba reSolar rakasanganiswa nerevolutionary technology kuti uwane zvakanyanya kubva mariri. Munyaya iyi, tichataura nezvazvo Solar Fusion. Icho chizvarwa chinotevera chakangwara chekugara photovoltaic mhinduro iyo Huawei akagadzira. Iyi pfungwa yekuchinja inosimbisa hungwaru uye hutsva tekinoroji kuitira kuti ipe iyo yakapfava yekuisa zviyero uye kuchengetedzwa kwepamusoro uye kushanda kwenguva refu. Chinangwa chikuru cheSolar Fusion ndechekuti imba inogona kuve ne100% yekuzvidyira.
Muchikamu chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezveSolar Fusion, maitiro ayo uye zvibodzwa zvikuru.
1 Chii chinonzi Solar Fusion
2 Chii chinonzi Solar Fusion system yakagadzirwa?
4 Zvakanakira simba rezuva
Chii chinonzi Solar Fusion
Huawei akatanga chizvarwa chinotevera chekugara smart photovoltaic solution "FusionSolar", ichisimbisa tekinoroji yakangwara, ichipa iyo yakapfava yekuisa zviyero, kuchengetedzeka kwepamusoro uye kushanda kwenguva refu, uye chinangwa chiri 100% mudzimba kuzvidyira. Yekugara padenga reimba PV masisitimu anofanirwa kusangana nekukura kuri kudiwa kwekushandisa wega. Nechikonzero ichi, zviri nani kuchengetedza masisitimu anodiwa.
Sisitimu yakagadzirirwa varidzi vemba vane hunyanzvi uye vanoisa. Vagadziri vekugara vanofanirwa kupa varidzi vedzimba yakasimba uye ine ramangwana-yakatarisana yekuzvidyira sisitimu inochengetedza kushanda kwepamusoro, kuchinjika uye nekukurumidza kuisirwa, uye inopa yakangwara mhinduro inosangana nemushandisi uye sevhisi zvinodiwa nevatengi, senge kure kuongororwa kwekutadza, kuti uwane zvakawanda. Zvakanaka uye zvishoma kugadzirisa.
Huawei inosanganisa yazvino dhijitari neinternet matekinoroji nekugara kwezuva tekinoroji. Iyi tekinoroji inokupa iwe optimization ye photovoltaic simba rekugadzira, Yakabatanidzwa plug-uye-kutamba bhatiri interface uye smart imba simba manejimendi.
Munzvimbo itsva yekugara yekuzvishandisa, iyo photovoltaic simba rinogadzirwa nemagetsi ezuva rinosangana nezvinodiwa zvemagetsi epamba mukati mezuva, uye simba rinosara rinogadzirwa rinoshandiswa kubhadharisa bhatiri uye rozobudiswa kuti rizadzise kudiwa kukuru kwemagetsi. Kudiwa kwemagetsi husiku kana masikati. Nenzira iyi, nzvimbo dzekugara photovoltaic systems dzinogona kuwana huwandu hwepamusoro hwekuzvishandisa uye kuwedzera kushandiswa kwematenga kuti uwane simba rakawanda.
Chii chinonzi Solar Fusion system yakagadzirwa?
Iyo system ine zvikamu zvinotevera:
Smart power centre: Yakanyanya kushanda inverter, ine hunyanzvi hwe98,6%. Iyo yakabatanidzwa yekuchengetedza simba rekuchengetedza inogona kushandiswa pakarepo.
Smart photovoltaic bhatiri optimizer: 99,5% kunyatsoshanda. Siya mamwe mapaneru pane imwe neimwe sirin'i kuitira yakakwirira system performance. Isa rack nekukurumidza muimba yekuchengetera uye nguva yekuisa padenga ichave ipfupi. Remote monitoring.
Management system: kuwana nyore data kubva kunharembozha. Proactive mishumo yezviitiko uye maaramu. Centralized management ye photovoltaic cell system.
Smart photovoltaic masero kuchengetedza: taurirana neiyo optimizer kuburikidza neMBUS. Inotsigira chaiyo-nguva yekutarisa uye manejimendi mamodule.
Iyo LUNA2000 yekugara smart bhatiri ndiyo inosimudzira yemhinduro yeHuawei panguva ino kutenderera. Bhatiri rinoshandisa lithium iron phosphate mabhatiri kuwedzera kuchengetedzwa. Iyo inotora modular dhizaini uye inotsigira inoshanduka simba rekuwedzera (5-30 kWh). Imwe neimwe bhatiri paki ine yakavakirwa-mukati simba optimizer kutsigira yakazvimirira kuchaja uye discharge management.
Iyo Fusion Solar system inopa yakasarudzika photovoltaic simba optimizer iyo inogona kudzikamisa matambudziko emumvuri wekugara uye inogonesa kushandiswa kweiyo photovoltaic masisitimu kuti ibudirire kuendesa yakaoma yakasanganiswa-inotungamira matenga.
Maererano nekambani, iyo optimizer yakagadzirwa naHuawei inogona kuwedzera simba rekushanda kwe photovoltaic modules kusvika ku30% pasinei nemumvuri uye nzira yekushanda kwakaderera.
Artificial Intelligence Driven Arc Fault Circuit Breaker (AFCI) inoshingairira kuderedza njodzi yemoto kuburikidza nekukurumidza kuvhara tekinoroji, inowana zero sirin'i voltage uye zero arc njodzi, uye inowana kaviri-layer kuchengetedzwa.
Iko kushandiswa kwegadziriro ndeyekugara kwekugara. Iyo smart photovoltaic management system inopa chaiyo-nguva yekuyerera kwesimba uye simba rekuverenga kuverenga, pamwe nekuita manejimendi yephotovoltaic mapaneru.
Kudzora modhi yekumisikidza sarudzo dzinosanganisira yakanyanya kuzvishandisa, kukoshesa pamusoro pekubuda kwegidhi, kukoshesa PV kuchengetedza, kukoshesa kupfuura jekiseni rekuwedzera PV simba mugedhi. Iyo system inogona kugadzirwa kuti vatengi vanongoshandisa simba rakawanda kana mutengo wakaderera uye chengetedza otomatiki kana mutengo wakakwira.
Zvakanakira simba rezuva
Ngationei kuti ndezvipi zvakanakira kushandisa rudzi urwu rwesimba:
Isimba rakachena zvachose rinobatsira kuderedza carbon footprint zvakanyanya. Nekuda kwekushandiswa kwayo tinodzivirira chizvarwa chegreenhouse magasi uye hatisvibise panguva yechizvarwa chavo kana panguva yekushandiswa kwavo. Pane chete miniscule kusvibiswa pakugadzira solar panel.
Iyo inovandudzwa uye isimba simba sosi nekufamba kwenguva.
Kusiyana nemamwe masimba anovandudzwa, simba iri rinogona kupisa zvinhu.
Izvo hazvidi chero mhando yenguva dzose kutorwa kwezvinhu kuti ishande. Izvi zvinoita kuti rive nesimba risingadhure iro rekutanga mari iri nyore kupora nekufamba kwemakore. Ichokwadi kuti imwe yematambudziko makuru ayo simba rinodzokororwa rakave naro kubva pakuvamba kwayo yaive yekutanga mari uye chiyero chekudzoka, kunyangwe izvi zvisisiri izvo nekuda kwekuvandudza tekinoroji. A solar panel inogona kuva nehupenyu hunobatsira hwemakore makumi mana.
Chiedza chezuva chakawanda uye chiripo saka kushandisa solar panel isarudzo inoshanda. Inenge chero nzvimbo yepasi pano inogona kushandisa simba rezuva. Zvakakosha kuziva kuti chimwe chezvakanakira simba rezuva ndechekuti haidi wiring. Izvi zvinobatsira pakuiswa munzvimbo dzinonetsa kuisa wiring yakadaro.
Chimwe chakanakira simba rezuva ndechekuti rinoderedza kudiwa kwekushandisa mafuta efossil, nokudaro kubatsira kuchengetedza zviwanikwa uye kuderedza kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve Solar Fusion uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Photovoltaic Solar Energy » Solar Fusion